1 PITA 5 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (1PI 5)
Mụ onwe m, onye bụkwa okenye chọọchị, na-agwa ndị okenye chọọchị nile nọ nꞌetiti unu okwu a. Eji m anya m abụọ hụ Kraịst mgbe ọ nwụrụ nꞌelu obe. Aga m esokwa keta oke nꞌebube ya na otuto ga-abụ nke ya mgbe ọ lọghachiri.
Nke a ga-eme ka unu nata ụgwọ ọrụ iketa oke nꞌebube ahụ na-agaghị agwụ agwụ, mgbe onye ọzụzụ atụrụ dị ukwuu ahụ bịara.
Ka ike nile bụrụ nke ya ruo mgbe nile ebighị ebi. Amin.
Nwanyị ahụ nọ na Babilọn, nke Chineke họpụtara unu na ya, na-ekele unu. Mak, ezi nwa m nwoke na-ekelekwa unu.
Jirinụ isurịta ọnụ ịhụnanya ndị Kraịst kelerịtaa onwe unu. Ka udo Chineke dịnyere unu nile nọ nꞌime Kraịst.